iPad Pro - Nhau dze iPhone | IPhone nhau
El iPad Pro iri pano. Iyo yehunyanzvi vhezheni yeApple piritsi inobuda yakasimba yakasimba kune yayo 12,9-inch skrini uye 2.732 x 2.48 pixels resolution, chimwe chinhu chinopa huwandu hwe 264 pixels pa inch.
IPad Pro Zvimiro
Kuti ufambe zviri nyore iOS 9 uye yayo hombe skrini, iyo iPad Pro inouya yakashongedzerwa ne Apple A9X chipset iyo inovimbisa kuwedzera ne 1,8 kushanda kwayo maererano neApple A8X. Kana iri iyo GPU, hunhu hwehunhu hwakakosha zvakare kuti ukwanise kunakidzwa nemitambo kana kunyorera kwehunyanzvi hwekugadzirisa vhidhiyo, graphic dhizaini, hofisi otomatiki uye zvimwe zvakawanda.
Nezve iyo chikamu chemifananidzo, iyo iPad Pro yakagadzirirwa ne 8 Megapixel iSight yekumashure kamera iyo lens inopa kuvhura kwe f / 2,4. Iyo inokwanisa kurekodha vhidhiyo muYakazara HD pa30 fps kana inononoka kufamba pa120 fps.
Kunyangwe ichi kuwedzera kwekuita, iyo iPad Pro inopa iyo kuzvimiririra kwemaawa gumi nemanomwe yekuenderera kushandiswa.
Apple Penzura yeiyo iPad Pro
Iyo iPad Pro skrini inogona kushandiswa pamwe chete ne Apple Pencil, chinyoreso chitsva kubva kukambani yeapuro iyo inovimbisa kuziva chinzvimbo, mafungiro uye kumanikidza kwatinoita padivi.
Tora zvinyorwa kana kudhirowa nePad Pro Ino vimbisa kuve yakasarudzika chiitiko neichi chinongedzo chatichafanirwa kutenga zvakasiyana asi zvakadaro, chichava chinhu chakakosha chevazhinji.
IPad Pro Kuwanikwa
IPad Pro ichave ichiwanikwa mune sirivheri, goridhe, kana nzvimbo grey kutanga munaNovember mune dzinotevera shanduro:
IPad Pro Nhau
Chizvarwa chinotevera chePad Pro chichatakura iyo M2 chip uye ichaburitswa mukudonha
Chiitiko cheApple munaKurume chakasiya parutivi iyo iPad Pro. Kazhinji Kurume aigara…
Satechi Mira uye Hub yePad Pro, mira uye zvese zvinongedzo
kubudikidza louis padilla inoita 4 mwedzi .
Kushandisa yako iPad mudesktop mode ichokwadi ine vateveri vakawanda, uye Satechi inotipa…
Apple inogona kunge iine dambudziko rekubatanidza MagSafe muiyo iPad Pro
kubudikidza Ngirozi Gonzalez inoita 6 mwedzi .
Runyerekupe rwunotanga kunongedza zvakadzikama pakubatwa kwechiitiko cheApple muhafu yekutanga ye…
Apple inogona kunge ichishanda pane 15-inch OLED iPad Pro
kubudikidza Tony Cortes inoita 6 mwedzi .
Nhasi chaiye ndanga ndichikurukura nemwana wangu nezve iPad Air yake. Anofara naye, uye neApple Penzura yake 2….
Apple iri kufunga nezvekushandura iyo Pro Pro uye ichiiita yakatwasuka
kubudikidza Tony Cortes inoita 9 mwedzi .
Kumba isu tiri vana vemhuri uye mumwe nemumwe ane yake yega iPad. Uye chokwadi ndechekuti kucherechedza ...
Iyo nyowani AirPods Pro uye iyo Pro Pro ine girazi kumashure haizosvika kusvika 2022 sekutaura kwaMark Gurman
kubudikidza Ignatius Room inoita 9 mwedzi .
Muchinyorwa chekupedzisira, vazhinji vaive vashandisi vaitarisira kuti panguva yechiitiko ichi, Apple ichapa chizvarwa chechitatu chakamirirwa kwenguva refu ...
Iyo 2020 iPad Pro ikozvino yave kuwanikwa muchikamu cheApple chakagadziriswazve
kubudikidza Jordi Gimenez inoita 11 mwedzi .
Rondedzero yezvigadzirwa zvakagadziridzwa uye zvakagadziridzwa neApple zvinoramba zvichikura. Mune ino kesi iyo Cupertino kambani yakawedzera ...
Logitech Combo Kubata, yakanakisa keyboard kune yako iPad Pro
kubudikidza louis padilla inoita 11 mwedzi .
Isu takaedza Lululook's magnetic iPad mubati
kubudikidza louis padilla inoita 12 mwedzi .
Lululook inotipa chimiro cheiyo iPad inogadzirwa zvachose nealuminium uye inoshandisa magineti akasimba kuchengetedza iyo ...
HoveBar Duo neTwelve South, chimiro chechero chekushandisa chaunogona kufungidzira
Isu takaedza iyo HoverBar Duo kubva gumi nembiri yekumaodzanyemba, chirevo chakataurwa chinokutendera kuti uise iPad yako pakukwirira kwakasiyana uye ...
Chiyeuchidzo "chinoimbwa" cheiyo iPad Pro umo Apple inoratidza kugona kwayo
kubudikidza Jordi Gimenez inoita 1 gore .
Tine chokwadi chekuti vanopfuura mumwe wevaya varipo vachiri kufunga kuti iyo iPad Pro yakatangwa gore rino haipo ...